Okubi ngekuba sekwephuzile ukuze banikezwe usuku lokuvela uyeza ubuso nobuso nomuntu oye elinde kuwe. Nakuba kungase kube nzima, ngetsembeke njalo inqubomgomo umhlabeleli. Plus uma usuku lwakho kungukuqonda ngempela, yena / yona uyobe ngokuphelele akunike ubengaqondile. Ngezansi, izaba ezinhlanu, nokuwuhlelo ngokuba sekwephuzile ngosuku.
Ecatshangelwa Kabi isikhathi sokugcwaliseka
Ushaye googled endaweni yomhlangano izikhathi eziningana, ngekhanda umzila, waziyeka zisendle kwamaminithi ambalwa okuqala nokho wena namanje sekwephuzile. Kungakhathaliseki ukuthi bekusuke traffic ngoyisiwula kusinda noma wena shaya zonke ukukhanya elibomvu, ukwahlulela nesikhathi sokubekwa kuyinto iphutha ngekwetsembeka, lokuyintfo kalula singathethelelwa.
Ukuze ugweme ukusebenzisa Suri, I kaningi Google imephu ukuphela kwami ​​kokugcina futhi ukuthatha isithombe tinkhombandlela kokuba ngihambe. Nakuba lokhu kuvumela i-date efanele nesikhathi sokulungiselela, Angikaze athole kahle waxwayisa lapho kufanele uvule noma kuphi ncamashi uya khona yami lokugcina nakho kubangela amahlaya ngokungagcini. Again, ngokuba ukunitshela lokho kuvame ukubonakala endleleni kwenza insini.
Ayikwazanga ukuthola yokupaka
Ukuhlala edolobheni sibukeka kusho akukho yokupaka. Nakuba kuba ekahle ukhethe indawo ngaphakathi ukuhamba ibanga, sibukeka, fun kakhulu usuku amabala akuzona elula ukuhamba ibanga away. Kulesi simo, kungcono ukuthola eliseduze isakhiwo yokupaka ngenkathi ekuqinisekiseni wena zinike isikhathi esanele ukuba sifike ngendlela esifike ngesikhathi.
Being a lover isilwane (ngethemba usuku lwakho kakhulu), isilwane sakho ingane yakho. Nakuba ekhaya ukushintsha nezimvunulo ngaphambi kosuku lwakho futhi ukuzithela ezithombeni isilwane sakho obonakala ube ngaphansi sezulu, wena ngokwemvelo bazoya ukubaduduza. Nakuba lokhu esiduduzayo kungase kuthathe isikhathi eside kunaleso esilindelekile, kokubili wena kanye isilwane sakho uyozizwa kakhudlwana, ikakhulu njengoba ebusuku kungenzeka kube sekwephuze kakhulu kunokujwayelekile.
Work wagijima sekwephuzile
Ibhayisikobho ngomzuzu wokugcina imihlangano kuphrojekthi ayengayilungiselelanga ukuba bedukile emsebenzini wakho, konke lokhu kwenzeka kithi. Nakuba lokhu olukholekayo izaba imisebenzi, qinisekisa ukuthi ngeke yaphenduka mkhuba usuku lwakho uzobona ukuthi kuwe, umsebenzi kwedlula kuyintfo lesembili kuka ubuhlobo bakho.
Kungakhathaliseki izaba yakho, kubalulekile ukwazisa usuku lwakho ukuthi kuyoba sekwephuzile. Akukhona kuphela ukuthi lokhu bakwenza nice, kodwa kubonisa ukuthi ungumuntu okhathalelayo.
Romance, A Feeling Noma Something We Do?